Avadiho ny 2GB mahery vaika OST Ampidiro ao anaty rakitra PST ao amin'ny endrika Outlook 2003 - Torolàlana iray isaky ny dingana
Home Products DataNumen Exchange Recovery Avadiho ny 2GB mahery vaika OST Ampidiro ao anaty rakitra PST ao amin'ny endrika Outlook 2003
mampiasa DataNumen Exchange Recovery Hanova 2GB mihoatra ny Oversized OST Ampidiro ao anaty rakitra PST ao amin'ny endrika Outlook 2003
Fanamarihana: tsy maintsy manana Outlook 2003 na kinova ambonimbony napetraka ao amin'ny solosainao eo an-toerana ianao mba hampiasa ilay fomba ao amin'ity torolàlana ity.
Raha ny OST Ny rakitra dia noforonin'i Microsoft Outlook 2002 na kinova ambany kokoa, ary mahatratra na mihoatra ny 2GB ny habeny, dia hihaona amin'ny be loatra OST olan'ny rakitra ary tsy afaka miasa ny OST manaova rakitra intsony. Amin'ny tranga toy izany dia azonao atao ny mampiasa DataNumen Exchange Recovery mba scan ny be loatra OST manaova rakitra, alao ny angona rehetra ao anatiny, ary tahirizo ao anaty rakitra PST vaovao ao amin'ny format unicode Outlook 2003 izay tsy manana fetra 2GB intsony. Avy eo azonao atao ny mampiasa ny Outlook 2003 na ny dikan-teny ambonimbony kokoa hanokafana ny fisie PST vaovao sy hidirana amin'ny tahiry rehetra tsy misy olana.
Fanamarihana: Alohan'ny hanovana ny be loatra OST rakitra amin'ny DataNumen Exchange Recovery, akatony azafady ny Microsoft Outlook sy ny rindranasa hafa mety hiditra na hanova ny OST hametraka.
Safidio ny be loatra OST rakitra hovaina:
Azonao atao ny mampiditra ny be loatra OST anaran'ny rakitra mivantana na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra. Azonao atao koa ny manindry ny bokotra hahitana ny be loatra OST rakitra hivadika amin'ny solosaina eo an-toerana.
DataNumen Exchange Recovery dia hitahiry ireo tahirin-kevitra voaova ho rakitra vaovao ao amin'ny endrika PST Outlook mba hahafahanao mampiasa Microsoft Outlook hanokatra sy hiditra amin'ireo angon-drakitra voaova. Ary amin'ny toerana misy anao, ny anaran'ny fisie PST vaovao dia xxxx_recovered.pst, izay xxxx no anaran'ilay loharano be loatra OST rakitra. Ohatra, ho an'ny loharano be loatra OST rakitra Source.ost, ny anaran'ny fisie PST niova fo dia Source_recovered.pst. Raha aleonao mampiasa anarana hafa, dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny mampiditra ny anaran'ny fisie PST mivantana na tsindrio ny bokotra hijerena sy hisafidianana ny anaran'ny fisie PST.
Koa satria izahay te-hanova ny be loatra OST apetraho ao anaty rakitra PST amin'ny endrika Outlook 2003, izay tsy manana fetra 2GB habe, tsy maintsy apetrakao amin'ny "Outlook 2003/2007" ny endrika fisehoan'ny PST output amin'ny boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra. Raha apetrakao amin'ny "Outlook 97-2002" na "Auto Determined" ny format, dia DataNumen Exchange Recovery Mety tsy hahomby amin'ny fanodinana sy fanovana ny be loatra anao OST hametraka.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Exchange Recovery start scanning sy fanovana tahirin-kevitra avy amin'ny loharano be loatra OST fisie ho any amin'ny fisie Outlook 2003 PST rakitra. Bara fandrosoana
Azonao atao izao ny manokatra ny rakitra PST niova fo amin'ny Microsoft Outlook 2003 na ny dikan-teny ambonimbony kokoa, ary mahita ny angon-drakitra voalohany OST ny rakitra dia navadika ho fisie PST vaovao.
Fanamarihana: Ny kinova demo dia hampiseho ity boaty hafatra manaraka ity hanondroana ny fahombiazan'ny fiovam-po:
Avy eo ianao dia afaka manokatra ny fisie PST niova fo amin'ny Microsoft Outlook 2003 na ny dikan-teny avo kokoa. Saingy, ho an'ny hafatra niova fo tsirairay, ny atiny ho soloina ireto fampahalalana manaraka ireto:
Mba hahazoana ny atiny voaova marina, azafady manafatra ny kinova feno.
Avadiho ny 2GB mahery vaika OST Ampidiro ao anaty rakitra PST ao amin'ny endrika Outlook 2003